Umhlahlandlela Wokuhambela Ukuvakashela iSan Antonio Ngomhlahlandlela
I-united states Texas San Antonio
I-San Antonio yombili idolobha elikhulu futhi idolobhana elimlando. Uzodinga ukuzulazula izici zombili zaleli dolobha laseTexas ngaphandle kokubhubhisa isabelomali sakho sokuhamba.
Ama-summm avame ukushisa kakhulu futhi ahlale egcwele. Kukhona nezixuku ezinkulu ezungeze isikhathi se-NBA esilula (i-Spurs yilabo abaphikisana nabo abahlala njalo) futhi ngesikhathi se-Alamo Bowl game game ngasekupheleni kukaDisemba. Ngo-Ephreli, izigaba zomuzi uFiesta (isitayela saseMardi-Gras San Antonio).
Ukuwa kwekusasa kanye nentwasahlobo kukhona izinqumo ezinhle kakhulu. Ubusika, yize ngezinye izikhathi luvame kakhulu ukuvakashela uhambo lwe-Riverwalk, aluvamile ukuthi luvame futhi luvame ukukhetha ukubuka umuzi ngaphandle kokulinda emigqeni ende.
I-San Antonio International iyakhonzwa yiSouthwest, okuyinto evame ukuhlinzeka ngempahla enengqondo kakhulu. Isikhumulo sezindiza sisenyakatho yedolobha. Iklabhu igibele phakathi kwesikhumulo sezindiza futhi idolobha lihlala ngaphansi kwama-$ 40, futhi abantu abayishumi bavunyelwe ukwabelana ngaleyo ndlela.
Uhlelo lukaSan Antonio olukhulu lokuhamba, okuthiwa yi-Via, lusebenzisa izimoto zamigwaqo kanye namabhasi. Ukudlula usuku olulodwa ukugibela okungenamkhawulo kuyatholakala ku-$ 2.75 USD / umuntu. Ngaphandle kokuthi ufike lapha ngomhlangano othize endaweni eyodwa, mhlawumbe umqondo omuhle ukuthenga ukuqasha imoto. Umuzi usebenza njengendlela ebalulekile yokuhlangana eTexas yemigwaqo emikhulu, ne-Interstate 10 njengesixhumanisi esempumalanga-ntshonalanga phakathi kweHouston no-El Paso. I-Interstate 35 iyisixhumanisi esenyakatho neseningizimu phakathi kweDallas / Fort Worth ne-Austin enyakatho naseningizimu emngceleni waseMexico.
Kwezinye izivakashi, ukusesha igumbi lehhotela laseSan Antonio lapha likhawulelwe endaweni yesikhungo / i-Riverwalk. Bavame ukukhokhisa i-premium ukuze bahlale phakathi kwawo konke. Qaphela: Amanye amahhotela afaka "i-Riverwalk" ngamagama awo awekho ebangeni elide ukusuka kuleyo ndawo. Amanani ngokuvamile aphansi ezindaweni ezikude.
Isibonelo, uma unokuhamba, ngezinye izikhathi kungcono ukuhlala ohlangothini olusenyakatho-ntshonalanga, amamayela angu-10 noma ngaphezulu ukusuka edolobheni, kodwa eduze nesikhumulo sezindiza kanye nezikhangisi ezifana ne-Sea World ne-Fiesta Texas epaki yendaba. Ihotela elinezinkanyezi ezine ngaphansi kwe $ 150 / ubusuku: I-Sheraton Gunter Hotel San Antonio.
I-Airbnb.com inikeza izindawo zokuqasha endaweni ye-Riverwalk nakwezinye izindawo eziyinhloko ezifana neLackland AFB ne-Six Flags eziseduze. Usesho lwamuva luvule izakhiwo ezingaphezulu kwezingu-40 ezithengiswa ngaphansi kwe $ 80 ubusuku bonke. Isilinganiso sokulala ebusuku sifika okungaphezu kuka- $ 90 / ubusuku. Enye yezindawo ezihamba phambili zamatende yi-Admiralty RV Resort, enezinkanyezi eziyisihlanu nezindawo ezingaba ngu-240. Amazinga wansuku zonke aqala cishe ngama-dollar angu-50, ngezaphulelo ezitholakalayo ezisebenzayo ezisebenza ezempi nabasebenzi abadala.
Ukukhetha okusobala kwezivakashi eziningi kungukudla kwaseMexico, futhi izitsha zangempela ziyatholakala kulo lonke idolobha ngamanani amaningi wamanani. Ungacabangi nje nje ngesiMexico lapha. Imithombo emihle yokuhlola izindawo zokudlela ihlanganisa ukukhethwa kweSan Antonio yesayithi kanye nomhlahlandlela wokudlela we-inthanethi we-San Antonio Express News.
Izindawo zokudlela ze-Riverwalk zingadliwa ngokweqile, zinikezwe izivakashi ezingafuni ukungena emzini ukuze uthole okunye okungokwenziwe okudla okuhlangenwe nakho.
Uma uphakamisela ukuhlola okuthile, izinqumo eziningana zesabelomali ezinhle zikhona nje ukuhamba okufutshane ukusuka ku-Alamo naseSikhungweni Sokuhlangana. Isibonelo esisodwa ngu-Deli's German Deli ku-424 East Commerce, lapho ungahle ulayishe isobho sabo esidumile se-split-sandwich cishe ngama-dollar ayi-10. Yilungele ukulinda emgqeni. Imigqa eminingi kanye nokudla okuhle kwesabelomali kungatholakala eMi Tierra, indawo yokudlela yaseMexico eyaziwa e-Santa Rosa nase-Commerce. Bakhonza kwasekuseni usuku lonke futhi bavulekile amahora angu-24. Kuyinto encane yokushisa kwesimo sezulu esifudumele kusukela e-Riverwalk, ngakho finyelela ushintsho oluthile lwephaketheni bese ukhokha ukuhamba kweTrolley.
Ngeke uye eParis ngaphandle kokufuna i-Eiffel Tower, futhi awukwazi ukuvakashela iSan Antonio ngaphandle kwe-Alamo. Kungakhathaliseki ukuthi isimiso sakho simatasa kangakanani, gcina imizuzu embalwa ukuze ubone lesi sikhumbuzo semlando.
Uma unezingane ku-tow (futhi ngisho noma ungenjalo), umqondo omuhle ukubuka i-movie ye-IMAX ngalokho okwenzekile lapha ngaphambi kokuhlola. I-movie iboniswa eMfuleni weMfula i-Rivercenter, efinyeleleka kusuka ku-Riverwalk futhi kuhamba kancane ukusuka ku-Alamo.
I-Alamo yiyona eyaziwa kakhulu yezinkonzo zikaSan Antonio, kodwa kunezinye eziningi ezinemlando enemibala ongayifunda. Ngokuvamile, ayikho amacala okungena.
Amapulazi ayisithupha Fiesta Texas iyindawo epaki yokuzijabulisa ephakeme yendawo. Zenzele umusa futhi uprinte amathikithi akho wokungena ngaphambi kokuba ushiye ipaki. Uzosindisa kokubili isikhathi nemali.
I-San Antonio Zoo (i-3903 North-St. Mary's St.) inegama eliqinile likazwelonke, ngamanani okungenisa ngaphansi kwe $ 20 / umuntu omdala kodwa ukupaka mahhala.
Leli dolobha lapho ungakwazi ukweqa izindleko zohambo lokubuka okuqondisiwe. Ezinye zezikhangayo ezihamba phambili zikhululekile, futhi ukufinyelela kulula.
I-San Antonio Sidetrips
Sidetrip I: Izwe laseTexas Hill
Lona yingxenye yeTexas engase ingafanani nemibono yakho yangaphambili: Amanzi, amahlathi namagquma. Le ndawo yenza uhambo lokuhamba olulodwa lusuku olulodwa, futhi amanani ngokuvamile aphansi kakhulu ekuvunyelweni kwamapaki ombuso noma kuLBJ Ranch ngaseJohnson City, cishe ihora elingasenyakatho yeSan Antonio.
I-Sidetrip II: i-Austin
Isitika se-bumper simemezela ukuthi "Gcina i-Austin Weird" futhi kungaba umzabalazo unikezwe izinombolo zabantu abajwayelekile abahamba lapha nsuku zonke. I-Austin ine-movie eyaziwa kakhulu yefilimu nomculo, futhi izindawo zokuhlala ezishibhile zingatholakala eduze ne-University of Texas noma ehostela eziningana zendawo.
I-Best San Antonio Steakhouses engu-9
Khumbula, i-Alamo manje isiGugu seMhlaba
I-Alta Vista, Umhlahlandlela wase-San Antonio Wokuvakasha
Yini Vula ngomhla kaKhisimusi eSan Antonio
Izindawo zokudlela eziphezulu ze-Kid-Friendly e-San Antonio
I-San Antonio Rodeo: I-Complete Guide
St. Augustine ku-Budget
7 Okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kweLaos Ozoyithanda
Indlela Yokuthola Ukudla Okungabizi Kwelinye Izwe Ngaphansi Kwezingu-$ 30 USD / Usuku
Ukuphepha & Umshwalense
Ukuhamba Okumangalisayo Nezintaba Ezinamanzi Ezungeze I-Balmoral Estate eScotland
Ama-Roller Coasters Aphakeme Kunazo Zonke Ezihamba Ngama-10 Aphakeme Kunazo Zonke
Indlela Yokuthola Ipasipoti Yakho eNew Orleans
Izindlela 10 Zokuthuthukisa Izimo Ezikuyo Uzothola Izindiza Eziphansi
Isikhathi Esihle Kangakanani Sokuvakashela eNingizimu Afrika?
Umhlahlandlela Wokuqala Wokuvakashela e-Italy
Isimo Sezulu SasePrague Siyajabula NgoSepthemba
Indlela Yokudlula Zonke Imilayezo e-Disney World
Ukuvakasha Ukuhamba Ngokuhamba Ngezindlela ZaseLake Como
Ukulinganiswa kwe-Diamond AAA
Okufanele Ukwazi Nge-Toronto International Airport